Sida loo xirto suud xagaaga adigoon kululeyn: tilmaamaha iyo tabaha ugu fiican | Ragga Stylish
Sida loo xirto suud xagaaga adigoon kululeyn
Ma jeceshahay inaad ogaato sida loo xirto suud xagaaga adigoon kululeyn? Kadib waxaad timid meeshii saxda ahayd.
Waa in la ogaadaa in, marka heerkulku sarreeyo, ka baxsashada kuleylka ay tahay wax aan macquul ahayn. Si kastaba ha noqotee, Waxaa jira xeelado ku habboon suudka kaa caawin kara inaad qabow noqotid oo aad raaxo ku jirto xagaaga.
1 Ma sameyn kartaa suud la'aan xagaaga?
2 Sida dharkaaga looga dhigo mid qabow oo raaxo leh
2.1 Ku sharad dhar badan oo neefsan kara
2.1.1 Talooyin ku saabsan qaadashada linenka
2.2 Raadi jaakado aan nidaamsanayn
2.3 Xulo midabyo fudud
2.4 Ka fogow kabaha maqaarka
Ma sameyn kartaa suud la'aan xagaaga?
In kasta oo ay fiicnaan laheyd in xagaaga oo dhan lagu fikiro muuqaal sidan oo kale ah, xaqiiqadu waxay tahay in badankood aysan awoodin.. Qeyb ka mid ah xagaaga waxay ka kooban tahay fasaxyo, waqti aad sameyn karto suud la'aan la'aan beddelkeedana aad xirato dhar jidhku aad uga go'anyahay oo maro yar leh. Shaatiyada Hawaii iyo gaagaaban loo habeeyay waa tusaale yar.
Si kastaba ha noqotee, kuma ciyaari kartid xagaaga oo dhan dhar dabacsan. Waana xilligan in aad sii wadato tagista xafiiska, halka inta lagu jiro waqtiga firaaqada ay sidoo kale jiri karaan munaasabado dhowr ah oo u baahan kara xirashada suud, sida aroosyada iyo dabaaldegyada xarrago leh. Sababtoo ah la'aanta beddelaadyo marka ay timaaddo bixinta muuqaal dhab ah oo rasmi ah, dacwada waa in loo adeegsadaa jiilaalka iyo xagaaga labadaba (haa, taas oo waliba ay ku jirto isku-xidhka).
Sida dharkaaga looga dhigo mid qabow oo raaxo leh
Miyaadan rabin inaad aragto naftaada oo ku dhexjirta suudh neef qabatin mar labaad ah, oo aad u rajeyneysay inaad ka dooratay dharka dharka si ka fiican sida heerkulka? Ma jirto sabab ay taasi u dhacdo, nasiib wanaag Dawaarka ayaa waqti dheer qaatay si loo soo saaro istaraatiijiyooyin ku habboon dharkan heerkulka sare.
Aan aragno waxa jira si looga ogaado sida loo xirto suud xagaaga adigoon kululayn, ama ugu yaraan iyaga ka dhig kuwo qabow oo aad ugu raaxeysan.
Ku sharad dhar badan oo neefsan kara
Hawsha ugu horreysa (uguna muhiimsan) waa in la hubiyo inaad doorato maro neefsasho leh. Suudhka suufku waa fiican yahay, laakiin xagaaga kaalay, waa inaad si fiican ugu kaydisaa qolkaaga oo aad maal gashataa dhar ka habboon kuleylka. Neefsashadooda ka weyn awgeed, dharka linenka ah ama dharka wax lagu arko ayaa ah dammaanad aamin ah xagaaga xagaaga. Waa in la ogaadaa in iyagu ayan ahayn ikhtiyaarrada kaliya, laakiin suuqa ayaa bixiya dhar badan oo ku habboon xagaaga. Si fudud ayaad ku aqoonsan doontaa iyaga oo isticmaalaya taabashada.
Talooyin ku saabsan qaadashada linenka
Ku duub dharka wanaagsan oo muuqaalkaaga xagaaga ah, adoo adeegsanaya suudh cusub oo qurux badan ama caawimaad shaati ah oo laga sameeyay maaddadan miisaanka fudud. Ama samee, maxaa diidaya, isku darida suudhka iyo shaati linenka ah marka heerkulku dalbado inuu kordhiyo heerka neefsiga muuqaalkaaga.
Haddii aad xidhatay dharka linenka ah, waxaad ku heshiin doontaa in cilladooda ugu weyni tahay laalaabyada dhaca marka la fadhiyo. In kasta oo ay qayb ka yihiin soo jiidashadeeda, haddana waxaa jira xeelad yar oo kaa caawin doonta inaad waxyar ka yareysid dhibaatada, annaguna uma jeedno inaan maalintii oo dhan istaagno si aan suudku u laalaaban. Ku saabsan yahay raadso suudhadhka dharka linenka ah oo sidoo kale wata xaddi xadidan oo fiilooyin kale ah, sida cudbiga.
Raadi jaakado aan nidaamsanayn
Xal kale oo mudan in laga fiirsado ayaa ah Mareykan aan nidaamsaneyn. Maqnaanshaha dahaadhku wuxuu yareynayaa culeyska iyo lakabyada dharka aad ku xiran tahay jirka, wax aad aad ugu riyaaqi doontid marka heerkulku kaco.
Xulo midabyo fudud
Haddii aad la yaabban tahay sida loo xidho suud xagaaga adigoon kululayn, jawaabta waxaa laga heli karaa midabada. Had iyo jeer waad ku saxnaan doontaa buluug buluug ah, laakiin xusuusnow taas adeegsiga midabada fudud waxay kaa caawin doontaa yaraynta kuleylka xoogaa. Haddii aad doorbideysid midabyo dhexdhexaad ah, tixgeli daahyada iftiinka ee bunni ama cawl ee suudhkaaga. Dhinaca kale, midabada hore waxay kaa caawin doonaan inaad hesho taabasho xagaaga ah, laakiin waxay ku habboon yihiin tiro yar oo munaasabado ah.
Ka fogow kabaha maqaarka
Haddii dhogorta laga ilaaliyo suudka, markay tahay kabaha, waxyaabaha ku darsanaya samaynta xagaagaaga rasmiga ah waxay u egyihiin kuwo diirran waa maqaar. Maaddaama espadrilles iyo flip-flops aysan ahayn ikhtiyaar, Waa lagama maarmaan in la raadsado qalab ku siinaya fursad aad kula qabsato kabahaaga xagaaga adoo ilaalinaya xarrago.
Waa maxay qalabka ku habboon xagaaga? Marka kuleylka ku dhufto, wax kasta oo cagahaaga cadaadis saaraa waxay u muuqdaan kuwo aan raaxo lahayn, laakiin heerar ayaa jira. Iyo, shaki la'aan, suede wuxuu ku yaal safka ugu hooseeya. Qashin-qubka, raaxadaadu way sii kordheysaa haddii aad ku bedesho kabahaaga maqaarka ah suede mar kasta oo ay suurta gal tahay.
Dharka yar ee aad isticmaaleyso, qaboojiyaha iyo raaxo ahaanshaha muuqaalkaaga rasmiga ah ayaa noqon doona. Laakiin waa inaad ku sameysaa meelaha saxda ah. Waxaan horey u aragnay midkood, dahaadhka jaakadda. Qaybta kale ee muuqaalka ee leh beddelmo leh dhar ka yar (oo sidaas darteed waa in loo adeegsadaa xagaaga) waa sharaabaadyo. Ku dar labo ka mid ah sharaabaadyo aan la arki karin kabahaaga oo ku raaxee hawo-qaadashadooda weyn inta aad ku guuleysanayso saameyn casri ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Sida loo xirto suud xagaaga adigoon kululeyn
Sidee si fiican loo seexdaa